Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u dhisida dowladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho lagu dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u dhisida dowladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho lagu dilay
May 3, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Wasiirka dhintay Cabaas Cabdulaahi Siraaji. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u dhisida dowladda federaalka Soomaaliya Cabaas Cabdulaahi Siraaji ayaa lagu dilay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho fiidkii caawa oo Arbaco ah, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Siraaji ayaa la dilay markii ilaalada hanti dhowraha guud ay rasaas ku fureen gaari uu saarnaa wasiirku, sida ay sheegeen dadka goobjoogayaasha ah.
Ma cadda ilaa iyo hadda waxa keenay toogashada.
Waxa uu noqonayaa masuulkii ugu sareeyay ee dowladda Soomaaliya katirsan oo lagu dilo Muqdisho tan iyo markii Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu xafiiska qabtay bartamihii bishii Maarso ee sanadkan.
Ilaa iyo 2,839 oo askar ah, oo ay ku jiraan saraakiil sare ayaa la xiray, kadib markii ay isku dayeen afgembi kaasoo hadda soo afjarmay, sida uu sheegay Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildirim. “Waxay ku ahayd [...]